Padaethar - Page 383 of 383 -
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန် မန္တလေးမြို့ ရတနာတိုင်းပြည် အိမ်ယာ (A14) တွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအခန်းတွင်း၌သေဆုံးနေ …
April 29, 2020 by Padaethar
ယနေ့ (၂၉ , ၄ , ၂၀၂၀) ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း၊ ၃၈ ၃၉ ကြားရှိ ရတနာတိုင်းပြည် အိမ်ယာ….. ဒုတိယထပ်ရှိအခန်း (A14) တွင်နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအခန်းတွင်း၌သေဆုံးနေ …. ယ္ခုရဲတပ်ဖွဲ့များနှင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူးတို့အဖြေသိရှိရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်။ မှတ်ချက်။။ ။သေဆုံး နေသော နိုင်ငံခြားသား မှာ( ၃ ) ရက်တိတိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ။ @Ko Kyaw Htay Oo / Ko Kyaw Swar unicode ယနေ့ (၂၉ , ၄ , ၂၀၂၀) ရကျနမှေ့နျးလှဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနဈ အခြိနျမန်တလေးမွို့ ၆၂ … Read more
နိမိတ်ကောက်ပြီးထိုးရမဲ့ မေလအတွက် နေ့နံအလိုက် အကျိုးပေး အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအတွက် နေ့နံအလိုက် အကျိုးပေး အောင်ဘာလေထီပေါက်ဂဏန်းများ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – အိမ်ရဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ အိမ်ရဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ ထီဂဏန်းရှာ နိမိတ်ကောက်ပြီး ထိုးပါ …။( ၅ ၈ ၂ ) တနင်္လာသားသမီးများ – သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ ထီဂဏန်းရှာ နိမိတ်ကောက်ပြီးထိုးပါ …။ ( ၆ ၀ ၃ ) အင်္ဂါသားသမီးများ – နာရီမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ နာရီတစ်လုံးမှာ ထီဂဏန်းရှာ ၊ နိမိတ်ကောက်ပြီး ထိုးပါ …။ ( ၁ ၄ ၇ ) ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ – အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ … Read more
အိမ်ရှင်ကိုနှိုးပြီး ဖမ်းလိုက်ရတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုးဖမ်းပွဲ…
ဆိုင်ကယ်လှည့်ကင်းရဲအဖွဲ့မှ အိမ်ရှင်ကိုနှိုးပြီး ဖမ်းလိုက်ရတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုးဖမ်းပွဲ မုံရွာမြို့တွင် ဖြစ်ပွား သတင်း + ဓာတ်ပုံ ၊ ကိုတိုးကြီး / မုံရွာ၊ ဧပြီ , ၂၉ ဖောက်ထွင်းသူခိုးက အိမ်ဖောက်ပြီးခိုးနေလို့ လှည့်ကင်းရဲအဖွဲ့က အိမ်ရှင်ကိုနှိုးပြီး ဖမ်းလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ် မုံရွာမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မုံရွာမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် ပြည်ထောင်စုလမ်းရှိ လူနေအိမ်တိုက်တစ်လုံးအား ညအချိန် ၂ နာရီခန့်တွင် တိုက်တံခါးသော့များ ဖျက်စီးဖောက်ထွင်းပြီး သူခိုးသုံးယောက်မှ တိုက်အတွင်းဝင် ရောက်ကာ စူကူဘီ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအား ခိုးယူနေစဉ် လှည့်ကင်းရဲအဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ မုံရွာမြို့မရဲစခန်းက နယ်ထိန်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲအုပ် အောင်ထွန်းဝင်း ညဉ့်နက်ဆိုင်ကယ်လှည့်ကင်း အဖွဲ့နဲ့ .. ရဲတပ်ရင်း (၂၈) လှည့်ကင်းအဖွဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကင်းလှည့်နေချိန်မှာ ဖမ်းမိတာဖြစ်တတယ်..” … Read more
ယူတတ်ရင် ကုသိုလ်ရပါတယ်(မန္တ​လေး) ဒီ‌ည ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ လှည့်ကင်းထွက်နေရင်း ကိုဗစ်ကြောင့် ညမထွက်ရအချိန်မှာ…. လူငယ်တစ်ယောက် ည(၁၁)အချိန်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုတွန်းလာတာတွေ့လို့စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ….. ကျွန်တော့်သားလေး ဆေးရုံတင်ထားရလို့ အိမ်ကနေဆေးရုံကိုသွားနေတာပါ ….။ လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ကဆီပြတ်သွားလို့ အခုလိုတွန်းလာရတာပါ တဲ့…..။ ဆေးစာအုပ်တွေလည်း ပါလာတာတွေ့ရတယ်….။ ဖုန်းဆက်မေးတော့လည်း မှန်ကန်တယ်….။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်ဆီဆိုင်မှ မဖွင့်တော့ဘူး…။ ဆေးရုံအထိတွန်းသွားရင်လည်း (၁)နာရီလောက်တွန်းသွားရရင် သူ့ခမျာ မလွယ်လောက်ဘူး…။ အဲ့ဒီတော့ ရဲတပ်ကြပ် ငွေလင်းထူးက သူ့ဆိုင်ကယ်ထဲက ဆီကိုထုတ်ပေးပြီး ထည့်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်….။ ဆီအတွက် တန်ဖိုးမရှိပေမယ့်လည်း အခုလို လူတစ်ဖက်သား အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ ကူညီပေးခဲ့ရလို့ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ credit-Zaw Moe Thant unicode version ယူတတျရငျ ကုသိုလျရပါတယျ(မန်တလေး) ဒီ‌ည ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ လှညျ့ကငျးထှကျနရေငျး ကိုဗဈကွောငျ့ ညမထှကျရအခြိနျမှာ…. လူငယျတဈယောကျ ည(၁၁)အခြိနျဆိုငျကယျတဈစီးကိုတှနျးလာတာတှလေို့စဈဆေးမေးမွနျးခဲ့ရာ….. … Read more
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို အင်းစိန်က ကိုဗစ် စောင့်​ကြည့်လူနာတွေက လုပ်သွားတဲ့ လုပ်ရပ်
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို အင်းစိန်က ကိုဗစ် စောင့်​ကြည့်လူနာတွေက လုပ်သွားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခု အင်းစိန် GTIမှာ Quarantine ဝင်တဲ့သူများက ကျွန်တော်တို့ Volunteers တွေကို အိမ်အပြန်လက်​​ဆောင်ပေးသွားသေးတယ် ….အခန်းထဲမှာ မစင်စွန့် အမှိုက်တွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပစ်…. ဒီလောက်လိုလေသေးမရှိ ​အစားအသောက်၊ သန့်ရှင်းရေး ၊ကျန်းမာရေး ၊ ကုတင်စောင်ခြင်ထောင် ၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ WiFi ကအစ အားလုံးဖြည့်စည်းပေးတာတောင် စည်းကမ်းရှိရှိ မနေထိုင်ကြဘူး ။ နောက်အသုတ် ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်များကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အင်းစိန် Quarantine Crnter ကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုအုံးမှာပါ။ GTI မှာလာရောက်နေထိုင်သူများမှာလည်း စည်းကမ်းရှိစွာနေထိုင် စေချင်ပါတယ်။မူရင်း – ThureinTun unicode စတေနာ့ဝနျထမျးတှကေို အငျးစိနျက ကိုဗဈ စောငျ့ကွညျ့လူနာတှကေ လုပျသှားတဲ့ လုပျရပျတဈခု … Read more
မိဘများစွန်ပစ်မှုကို ခံရတဲ့ ကလေးလေးကို သင်္ကန်စီးပေးလိုက်သော အခါ ……
မိဘများစွန်ပစ်မှုကို ခံရတဲ့ ကလေးလေးကို သင်္ကန်စီးပေးလိုက်သော အခါ …… အစွန့်ပစ်ခံဘဝမှ မြင့်မြတ်သောဘဝစီးသို့… ရက်စက်စွာစွန့်ပစ်ခဲ့သော မေမေနဲ​ဖေဖေသားအခုဆိုကျမ္မာလျက်ပါဗျာ…။ လူစဉ်မမှီဘူးဆိုပြီးအထင်သေးစွာစွန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူရာမဝင်ခဲ့မဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေသားအခုဆိုအများသူငှာချစ်ကြတဲ့ဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ…။ (ချက်ကြိုးတံလန်းနဲ့စွန့်ပစ်သွားခဲ့​ဖေဖေနဲ့မေမေသားသားအသက်ရှင်လျက်ဖြစ်နေပါပြီလို့) တစ်သက်လုံးဝတ်ပေးလိုက်ရင် ​ကောင်းမလားလို့ သင်္ကန်းအညိုလေးနဲ့ကြည်ညိုစဖွယ်ပါ….. သားသားလေးထက်ဘုဏ်လျှံ(ခ)ရေသန့်ဗူးမျိုးဆက်သစ်မိဘမေတ္တာ ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အနီးထန်းတစ်ပင်မြို့နယ်ထိန်နှစ်ပင်ရွာ Ph. 09422227822 ..09777717607 ရှယ်ပေးကြပါနော်စွန့်ပစ်ကလေးများ​စောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်…..။Credit unicode version မိဘမြားစှနျပဈမှုကို ခံရတဲ့ ကလေးလေးကို သင်ျကနျစီးပေးလိုကျသော အခါ …… အစှနျ့ပဈခံဘဝမှ မွငျ့မွတျသောဘဝစီးသို့… ရကျစကျစှာစှနျ့ပဈခဲ့သော မမေနေဲဖဖေသေားအခုဆိုကမ်ြမာလကျြပါဗြာ…။ လူစဉျမမှီဘူးဆိုပွီးအထငျသေးစှာစှနျ့ဖွဈခဲ့တဲ့လူရာမဝငျခဲ့မဝငျခဲ့ဘူးတဲ့အမသေားအခုဆိုအမြားသူငှာခဈြကွတဲ့ဘဝသို့ရောကျရှိခဲ့ပါပွီ…။ (ခကျြကွိုးတံလနျးနဲ့စှနျ့ပဈသှားခဲ့ဖဖေနေဲ့မမေသေားသားအသကျရှငျလကျြဖွဈနပေါပွီလို့) တဈသကျလုံးဝတျပေးလိုကျရငျ ကောငျးမလားလို့ သင်ျကနျးအညိုလေးနဲ့ကွညျညိုစဖှယျပါ….. သားသားလေးထကျဘုဏျလြှံ(ခ)ရသေနျ့ဗူးမြိုးဆကျသဈမိဘမတ်ေတာ ပရဟိတမိဘမဲ့ကြောငျးရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှိုငျသာယာအနောကျပိုငျးတက်ကသိုလျအနီးထနျးတဈပငျမွို့နယျထိနျနှဈပငျရှာ Ph. 09422227822 ..09777717607 ရှယျပေးကွပါနျောစှနျ့ပဈကလေးမြားစောငျ့ရှောကျပေးနပေါတယျ….. Credit
မန္တလေး မြို့ကြီး သတိတော့ထားကြတော့ဗျာ ….
မန္တလေး မြို့ကြီး သတိတော့ထားကြတော့ဗျာ …. 28.4.2020 မန္တလေး၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊အနှိပ်တော်ရပ်ကွက်၊ ၆၂လမ်း×၆၁လမ်းကြား၊၁၉လမ်းနှင့် ၂၀လမ်းကြား ခင်မကန်ကျောင်း မြောက်ဘက်ပေါက်အနီးရှိ အိမ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး အသက်ရှုကြပ်ရောဂါခံစားရကာ အနံမရသဖြင့် …. ယနေ့ည ၀၈၁၅ နာရီတွင် နန်းတော်ရှေ့လူမှု့ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ Quarantine ဝင်ရောက်ရန်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ ကနဦး ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ရပ်ကွက်လူကြီးထံ လားရှိုးမှ ပြန်လာသည်ဟု သတင်းပို့ခဲ့သဖြင့် Home Quarantine ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်ဟု သိရှိရပြီး ထီရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းမှာ ယခင်က လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ နောက်ဆက်တွဲသတင်း ဖော်ပြပေးပါမည်။ကနဦးသတင်းသည် တိကျမှန်ကန်သော်လည်း တာဝန်ရှိသူများမှ ၎င်းတို့သို့ သတင်းပို့ထားကြောင်း Home Quarantine ဝင်ထားကြောင်း ရှင်းလင်းထားသဖြင့် ပိုစ့်ကို edit ပေးထားပါသည်။ #Mandalay_True_News unicode မန်တလေး … Read more
Quarantine မှ ထွက်ပြေးသူ လင်မယားစုံတွဲအား ထောင်ဒဏ်(၃)လ အမိန့် ချမှတ်
April 28, 2020 by Padaethar
ထောင်ဒဏ်(၃)လ ချက်ချင်းချ ဘိုးတော်နဲ့ ဘွားတော်လေး (၂)ယောက်ကို အတည်ပြုပြီး၍ရေးမြို့နယ် အစင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးမှ ပြန်ခေါ်လာပါပြီ… မော်လမြိုင် (၁၀)မြို့နယ်အဆောင် Facility Quarantineပြုလုပ်ထားသည့်နေရာမှ ထွက်ပြေးသွားသည့် လင်မယား(၂)ဦးပါ။ မောင်ဝင်းမင်းကျော် (၁၇)နှစ် (ဘ)ဦးကျော်ဇင်မသွယ်တာထွန်း (၁၅)နှစ် (ဘ)ဦးခမ်းပိုင် မော်လမြိုင် (၁၀)မြို့နယ်ဆောင် Quarantine မှ ထွက်ပြေးသူလင်မယားစုံတွဲ(၂)ဦးအား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီ/မံဥ‌ပဒေဖြင့် မော်လမြိုင်တရားရုံမှ လင်မယားစုံတွဲအား ထောင်ဒဏ်(၃)လ အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။ credit zin moe unicode version ထောငျဒဏျ(၃)လ ခကျြခငျြးခြ ဘိုးတျောနဲ့ ဘှားတျောလေး (၂)ယောကျကို အတညျပွုပွီး၍ရေးမွို့နယျ အစငျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှုးရုံးမှ ပွနျချေါလာပါပွီ… မျောလမွိုငျ (၁၀)မွို့နယျအဆောငျ Facility Quarantineပွုလုပျထားသညျ့နရောမှ ထှကျပွေးသှားသညျ့ လငျမယား(၂)ဦးပါ။ မောငျဝငျးမငျးကြျော (၁၇)နှဈ (ဘ)ဦးကြျောဇငျမသှယျတာထှနျး … Read more
ယမန်နေ့ ၁၂ နာရီကျော်က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် သုံးမွှာကလေးမွေးဖွား
ဆားလင်းကြီး၊ ဧပြီ-၂၇ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် မတောင့်တရွာ ၁၆ ကုတင်ဆံ့ တိုက်နယ် ဆေးရုံတွင် ယမန်နေ့ ၁၂ နာရီကျော်က သုံးမွှားပူးကလေးငယ်များကို ဆရာဝန်များမှ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကလေးငယ်အားလုံးသည် ယောကျာင်္းလေးများဖြစ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ၆ ပေါင်ဆီရှိကာ တစ်ဦးလျင် တစ်မိနစ်ခြားဆီ မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ “အမ်ထရာဆောင်း ရိုက်တုန်းက နှစ်မွှာပေါ့၊ခွဲမွေးမှ သုံးမွှာဖြစ်နေတာ၊မိခင်ရော ကလေးတွေပါ အားလုံးကျန်းမာပါတယ်၊အရင် ဒီဆေးရုံမှာ သုံးမွှာထိ မွေးဖူးတာ မရှိဘူး “ဟု တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆရာဝန် ဒေါက်တာဇော်မျိုးနိုင်က ပြောသည်။ မွေးလူနာအမျိုးသမီးကို ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ဇော်မျိုးနိူင်နှင့်အတူအကူသူနာပြုဆရာမ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ခိုင်၊ဒေါ်ထားထားစိုးနှင့် သားဖွားဆရာမများဖြစ်ကြသော ဒေါ်ဋ္ဌေးမြ၊ဒေါ်နွယ်သဇင်စိုးတို့ ကမွေးဖွားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးမွှာကလေးငယ်များကို မွေးဖွားခဲ့သော မိခင်မှာ ယင်းမာပင်မြို့နယ်မြင်သာ ကုန်းရွာမှ အသက်၂၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ယခင် … Read more
ဒူးနာတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ(လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ)
April 27, 2020 by Padaethar
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ​ ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ် ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်…. ခြေသလုံးပုံပါနေလို့ကန်တော့ပါရှင်….ရှားစောင်းလက်ပတ် လက်တစ်ဝါးစာကို ဆူးတွေ လှီးထုတ်ပြီးအပြားလိုက်နှစ်ခြမ်းခြမ်းလိုက်ပါ ….ပြီးရင်မီးနွေးနွေးလေးကင်ပါ အပူခံနိုင်သလောက်ကင်ပြီးရင် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်းတင်ပါ ….. ပြီးရင်ရှားစောင်းလက်ပတ်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ပုံပါအတိုင်း ကြွပ်ကြွပ်အိပ် ကိုအနေတော်ညှပ်ပြီ အပြင်မှာပြန်ကပ်ထားပါ ….ပြီးရင် ကြွပ်ကြွပ်ကြိုးနဲ့မလျှော့မတင်းစီးပြီးထားပါ သွားစရာမရှိရင်တော့ နေလည်လဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ် ….. ညအိပ်ရာဝင်လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ် တစ်ညလုံးစည်းပြီးအိပ်လိုက် မနက်ကျတော့ပြန်ဖြေ နောက်ရက်ညအိပ်ရာဝင်တစ်ခါထပ်လုပ် အနာပေါ်မူတည်ပြီးပျောက်ပါမယ် …..ကျမတော့ ၃ ရက်ဆက်လုပ်တာနဲ့ခုပျောက်သွားပြီ ….. ခုတော့ချော်လဲထားတဲ့ ဘယ်ဖက်ဒူးကဒဏ်ကိုပြန်လုပ်ထားတာပါ ….ခြေဖနောင့်နာရင်လဲ … Read more